Hoobiyaal dad ku dhinteen oo lagu garaacey magalaada Muqdishu
WASHINGTON. DC — Ugu yaraan labo ruux ayaa ku geeriyootay labo kalana waa ay kudhaawacmeen kadib marki ay sadex madfac duhurnimadi maanta ku habsadeen xaafado ku yaalla degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho.
Madaafiicdaan oo ahaa hoobiyaal ayaa la sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa bar-koontarool oo ay ciidamada Dowlada Soomaaliya ku leeyihiin degmada Wadajir.Afhayeenka Maamulka gobalka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalaneayaa VOA u xaqiijiyay inhooyo iyo gabdheeda ay ku geeriyoodeen mid ka mid ahhoobiyayaasha oo ku dhacay guri ay daganaayeen. Saraakiisha Dowlada ma sheegin cid loo qabtay hoobiyayasha iyo meeshalaga soo tuuray intaba, hase ahaatee arintaan ayaa ku soo beegmeysaxilli shalay Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ay sheegtay in ay billaabeyso dagaal ka dhan ah Al Shabaab.
​Hoobiyaal lagu garaacay qaybo kamid ah Muqdishu
Soomaliya 29.09.2016. 13:29
MUQDISHU, Somalia - Weerar loo adeegsaday hoobiyaal ayaa Saakay oo Khamiis ah waxa uu ka dhacay magaalada Muqdishu, ee caasimada Soomaaliya.
Ilaa 7 gantaal oo labo kamid ah qarxin ayaa lala beegsaday xaafadda Buulo-xuubey iyo goobo ku dhaw xarunta ay ku shaqee ...
Hoobiyaal ku dhacay nawaaxiga Madaxtooyada Somalia
Soomaliya 04.07.2017. 18:18
​Khasaaro ka dhashay qarax ka dhacay Duleedka Kismayo
Soomaliya 04.02.2017. 21:45
​Somalia: Qarax ka dhacay magaalada Kismaayo
Soomaliya 16.11.2016. 12:55
​Ku dhawaad 200 Somalia ah oo ku dhintay badda
Soomaliya 18.04.2016. 10:54
​5 qof oo ku dhimatay Muqdishu iyo Maydad laga helay Baladweyne
Soomaliya 08.10.2016. 14:16
Soomaliya 17.04.2016. 13:05